Debanye umuaka gi n'ulo akwukwo French: gini bu uzo iji soro?
Edere site Tranquillus | June 26, 2018 | Iji dozie ma rụọ ọrụ na France
Mgbe ị kpebiri ịbịa biri na France gị na ezinụlọ gị, ịdenye ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ French bụ ihe dị mkpa. Na France, enwere ọtụtụ ụlọ akwụkwọ: ụlọ akwụkwọ ọta akara, ụlọ akwụkwọ elementrị, kọleji na ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Kedu ka ị ga - esi debanye aha ụmụ gị n’ụlọ akwụkwọ French?
Ndebanye aha na ụlọ akwụkwọ ọta akara ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ elementrị
Inderlọ akwụkwọ ọta akara nwere ike ịnweta ụmụaka niile site na afọ atọ (afọ abụọ n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ). Ọ na - anọchite anya nzọụkwụ mbụ maka agụmakwụkwọ mmanye nke na - amalite mgbe ọ dị afọ isii na ụlọ akwụkwọ elementrị. E kewara ụlọ akwụkwọ ọta akara na ngalaba atọ: nke nta, nke etiti na akụkụ buru ibu. Followmụaka soro usoro mmụta ise n’ime afọ atọ a. Isi ụlọ akwụkwọ elementrị bụzi ụgwọ maka ụmụaka niile.
Ndebanye aha na ụlọ akwụkwọ ahụ dị mfe maka ụmụ amaala French: ihe niile ị ga - eme bụ ịga ụlọ ezumezu obodo wee tinye maka ndebanye aha na ntọala achọrọ. Ma maka ụmụaka ndị ezinụlọ ha kwagara France, usoro ahụ dị obere.
Ndebanye aha nke nwatakịrị nọ n'ụlọ akwụkwọ French
Nwatakiri nke biara na Farani na-ejikarị emekorita omenala. Ọ bụrụ na ọ bụghị ịmụta French na agụmakwụkwọ na-amụ ihe mgbe ọ bịarutere CP, ọ nwere ike ịkekọta otu klas nkuzi. Maka umuaka ndi ozo, umuntakiri allophone ndi biara na-agakwa iga akwukwo n'ulo akwukwo French.
Enwere aha na ndị ụlọ akwụkwọ ọta akara ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ elementrị na-eme ndị nne na nna, maọbụ site n'aka onye ahụ na-ahụ maka nwatakịrị. Ha ga-ebu ụzọ gaa n'ọnụ ụlọ obodo nke obodo ma ọ bụ obodo ha bi, ma gwazie ụlọ akwụkwọ ahụ ka ọ deba aha nwata ahụ na klas nke kwesịrị ekwesị.
GỤỌ Kedu ihe dị iche n'etiti ụgwọ ọnwa na nnukwu ụgwọ ọnwa?
Nchoputa ihe omumu nke nwa
Mgbe nwatakịrị rutere France, ndị nkụzi pụrụ iche na-ele ya anya. Ha na-achọ ịmata ihe ọmụma ya na French na asụsụ ndị ọzọ kụziri. A na-enyocha nkà mmụta sayensị na asụsụ mbụ ya. N'ikpeazụ, ndị nkụzi na-enyocha ọkwa ha nke ọma na okwu ederede.
Dabere na nsonaazụ ndị e nwetara, a na-enye nwa na klas ma ọ bụ unit eme ka ọ mara na mkpa ya.
Ọrụ nke nwa akwụkwọ
A na-ekenye nwatakịrị dị ọhụrụ na ụlọ akwụkwọ ọta akara ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ elementrị na-adabere na ọgbọ ya. Ụlọ akwụkwọ na-akwaliteghị agụ akwụkwọ, mana ọ dị mma ịkwadebe ihe ndị bụ isi nke ụlọ akwụkwọ ma mee ka nwa ahụ nwee ọganihu n'ime ọha mmadụ.
Na ọkwa nke ụlọ akwụkwọ elementrị ahụ, nwa ahụ ga-achọ ịgbaso agụmakwụkwọ dị elu na French ma nwee ike imejupụta otu ngalaba.
Ọmụmụ ihe omumu na asụsụ French
Ụmụaka ndị bịarutere France nwere ohere ịgafe akara mmụta French. Ya mere, Delf Prim nwere ike inweta ha n'etiti afọ asatọ na iri na abụọ. Nke a bụ akwụkwọ ikikere nke ndị Ozi nke Education nyere. A mara ya na ụwa ma nweta Ụlọ Akwụkwọ International maka Ọmụmụ Akwụkwọ Nsọ.
Ndebanye aha ụmụaka nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị
Ọ bụ iwu na iziga ụmụ si mba ọzọ gaa n'ụlọ akwụkwọ French mgbe ha rutere n'ókèala. Usoro ndebanye aha nwere ike ịdị iche ma ọ bụrụ na ọ bụ ịlaghachi France ma ọ bụ ntinye mbụ. O kwere omume ime ka ụmụ akwụkwọ na-abata na France n'enweghị ekwu asụsụ.
GỤỌ Kedu onye ga-erite uru site na nkwụsị ọrụ metụtara mmechi ụlọ akwụkwọ? Ọ bụrụ n ’ịnwere ike inweta ya, kedu ego ya na oge ịkwụ ụgwọ ya?
Nchoputa nke omumu akwukwo
A na-enyocha ndị mmụta si mba ọzọ ma na-achọ ịbanye n'ụlọ akwụkwọ French. Ndị nkuzi na-atụle nkà ha, ihe ọmụma na mmezu ha. N'ihi ya, ndị nne na nna ga-akpọ Casnav ebe ha bi.
Nkwekorita ga-ekwe ka ezinụlọ na nwa ahụ zute onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ. Ọ ga-enyocha ụzọ nwa ahụ ma hazie nyocha mmụta. A na-ebute ya na ndị nkụzi na-elekọta ya. Ihe omuma ihe omumu ya na ihe ndi ozo nke nwere ike ime ka o ruo n'ókè ya ga-ekpebi oru ya. Ọ na-anọkarị n'ebe dị anya site n'ụlọ ezinaụlọ.
Debanye aha akwukwo n'ụlọ akwụkwọ French
Ndị nne na nna debanyere ụmụ ha aha na nnukwu ụlọ akwụkwọ ebe e kenyere nwa ahụ. Ọ nwere ike ịbụ kọleji ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Nwa ahụ ga-anọ na mpaghara French mgbe ọ debanyere aha na ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ French.
Akwụkwọ ndị a ga-enye nwere ike ịdịgasị iche dị ka rectorates. Ọ bụrụ na achọrọ ID, akwụkwọ ndị ọzọ nwere ike ịtụ anya. Ya mere, ọ kacha mma ịjụ ajụjụ na ụlọ ọrụ ahụ echebara echiche tupu ị debanye aha nwa ahụ.
Ụlọ akwụkwọ nke ụmụ akwụkwọ na France
Nwa akwụkwọ ahụ nwere ike ịga na nkeji dị iche iche dị ka ọkwa mmụta ya. Ụmụaka debara aha ha na mba ha ga-enwe ike ịmekota nkụzi nke ụmụ akwụkwọ na-abata na allophone. Ndị na-esoghị akwụkwọ ụlọ tupu ha abanye n'ụlọ akwụkwọ French ga-abanye n'otu ụlọ ọrụ a kapịrị ọnụ.
GỤỌ Mepee akara ekwentị ma chọta onye na-ahụ maka ịntanetị na France
Ihe mgbaru ọsọ bụ ikwe ka ụmụ akwụkwọ tinye ntinye ọsọ ọsọ. Maka nke a, ndị nkuzi na-enyocha onye mmụta ahụ n'afọ nile, ọ bụghị na njedebe nke afọ akwụkwọ. Ọ na-erite uru na nkuzi na pedagogic unit iji kwado ya ruo ọtụtụ afọ. Ya mere, nwa akwụkwọ na-anọghị n'ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ na-enweghị agụmakwụkwọ nwere ike mezue ọzụzụ ya na French.
Ọ bụghị iwu maka ndị na-eto eto karịa 16. Ya mere, ha nwere ike ijikọta ụlọ ọrụ ụlọ akwụkwọ dị elu, ọkachamara ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ n'ozuzu ha ma si otú a na-erite uru site na ọrụ ịme ihe.
Ọmụmụ Ọmụmụ Asụsụ Asụsụ French
Ndị na-eto eto dị n'agbata afọ iri na abụọ na afọ 17 nwekwara ohere ịchọta diploma diploma na French ma ọ bụ Junior, dị ka ụmụaka na-eto eto. Ụlọ Ọrụ International Maka Ọmụmụ Ihe Ọmụmụ Ihe Ọmụmụ na-ekwu banyere diploma a, nke ụwa ghọtara.
N'ụzọ doro anya, mgbe nwatakịrị rutere France, ọ ghaghị ịkekọrịta ụlọ akwụkwọ French. Ọrụ a dị irè site na ụlọ akwụkwọ ọta akara na ụlọ akwụkwọ sekọndrị, site na ụlọ akwụkwọ. Ndị nne na nna ga-aga n'ụlọ ezumezu obodo ịmara akwụkwọ iji nye ma hụ usoro ị ga-ewe. Ha n'ozuzu ha gbanwere. Ha ga-enwe ike idebanye nwa ha na akwụkwọ French nke na-adọrọ ha mma. Ngalaba a kapịrị ọnụ na-anọ n'ọnọdụ maka ụmụ ọhụrụ bịarutere na France. Ha na-enye ha ohere ọ bụla iji nwee ihe ịga nke ọma n'ụlọ akwụkwọ.
Debanye ụmụ gị n'ụlọ akwụkwọ French Mee 14th, 2020Tranquillus
gara agaỤtụ isi maka ndị mba ọzọ na France
-esonụIhe gbasara ịkwọ ụgbọala na ịkwọ ụgbọala na France
Ụtụ isi maka ndị mba ọzọ na France
Kedu ihe bụ nkwụchi ụtụ?